China bulldozer undercarriage zvikamu vagadziri uye vanotengesa | Jinjia
Bulldozer chidimbu chikuru chemidziyo inoshandiswa kujekesa ivhu, dombo, jecha uye wreckage inowanzo kuwanikwa mukuvaka, kuchera, nekurima. Rudzi urwu rwekugara uchisangana nezvinhu uye simba rakadzokororwa pamushini rinokonzera kudiwa kukuru kwezvikamu zvekutsigirwa. Kugara uchigadzirisa zvishandiso zvako zvepasi-zvinobatsira kurebesa hupenyu hwesika rako uye kuongorora kwako kwepasi pemota kunovimbisa kugona kwakanyanya panzvimbo yebasa.
Izvo zvikamu zvakasiyana zvecrawler undercarriage - zvinongedzo, mapini, bushings, sprocket, rollers, idlers, shangu uye mafuremu - zvinoratidzika kunge zvakapusa, zvikamu zviri nyore. Asi usakanganisa; kana izvi zvinhu zvikaunganidzwa kuita sisitimu inotsigira uye inofambisa tambo-yerudzi muchina, dhizaini yepasi pemotokari inova nzira yakaoma, iyo, nyanzvi dzinotiudza, inogona kuverenga hafu (kana kupfuura) yebhiri rekutsvaira dozer.
Zviripachena, isu hatigone kugadzirisa anokambaira epasi pemotokari mune zvakadzama pano. Asi isu tinogona kuongorora zvimwe zvekutanga nezve dhizaini, kupfeka zvinhu (zvemaketani nezvimisikidzo, kunyanya), maitiro ekugadzirisa uye mashandiro ekushandisa, ayo, anotorwa pamwechete, anogona kukubatsira kudzora kupfeka kwepaseri uye, nekudaro, kudzikisa mutengo wepasi pekutakura.
Mukutaura kwakapamhama, dozer undercarriage dzinogona kuiswa mumapoka nema pini uye bushings akaiswa mafuta - kana kusazorwa mafuta. Iwo mapini uye bushings, hongu, zvinogadzira hinges muketani cheni iyo inobvumira izvo zvisungo zvecheni kukotama kutenderedza izvo zvinokambaira uye idlers.
HONGDA dozer undercarriage zvikamu zvinoisa kusimbisa kwakasimba pane kugoverwa kwezvakakwana zvezvinhu zvako zvese zvaunoda bulldozer. Kunyangwe iwe uri mumusika weakmarketcha nyowani, chaiyo yakasara, yakanaka kushandiswa, kana kugadzirwazve, tinogona kubatsira kutsigira kwako kugadzirisa zvaunoda. Nedare redu rakakura revagadziri veprimiyamu, iwe uchavimbiswa kuona yakaderedzwa nguva yekuzorora uye kuwedzera kugadzirwa
HONGDA dozer undercarriage zvikamu zvinopa mhando yakanzi Korea uye Italian Undercarriage iyo inokuchengetedza iwe mirwi yemari kubva kune wako OEM mutengesi.
Isu tinopa 2 gore 3000 yeawa garandi pane zvigadzirwa zvedu.
Tifonere isu kana kuendesa online quote chikumbiro kuti utange kusevha pane yako undercarriage mutengo!
Pashure: Ductile simbi yakakandirwa track track roller end butiro
Zvadaro: OEM Yakagadziriswa China Track Chain D8n Bulldozer Chain Link 9W3317 Undercarriage Zvikamu
Crawler Bulldozer Undercarriage Zvikamu
Undercarriage Bulldozer Zvikamu
Zvepasi Pedu Zvikamu ZveBhurldozer